Iphrofayela Yenkampani - Noelson Chemicals Technology Co., Ltd.
Gcina isithembiso futhi usebenza nedumela
Yizizathu zokuqamba amagama kanye nezinkolelo ezingunaphakade!
■ UNoelson Chemicals ungumkhiqizi nomphakeli wamakhemikhali aphelele. Kusukela ngo-1996, uNoelson Chemicals utshale imali futhi wasungula isitshalo sakhe sokukhiqiza phakathi nezwe laseChina, njengoNoelson Micro-powder Industry Inc., uNoelson Chemicals (Nanjing) Co., Ltd. uNoelson Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. uNoelson Chemicals Technology Co., Ngokusho kwezinga lobuchwepheshe obuholayo bezocwaningo nentuthuko, ukukhiqizwa nokunikezwa kwemikhiqizo ehlukahlukene enezinga eliphakeme lomhlaba ezifuywayo, futhi njenge-ejensi yemikhiqizo ethile yegama lomhlaba eyaziwayo. Umqondo wethu wenkonzo eyodwa yokumisa okhethekile i-antirust pigments kanye nemikhiqizo yama-conductive & antistatic agents, iwine isikhundla somholi wemboni.
■ UNoelson Chemicals uphatha umoya wokubambisana njengempilo yenhlangano, simema futhi sisebenzisane nezikhungo eziningi zocwaningo lochwepheshe ngaphakathi nangaphandle kwezwe, siqoqa abantu ngamakhono, sigxile emaphethelweni amasha ahamba phambili emhlabeni wonke we-Micro-powder kanye nezingulube zomsebenzi. , qhubeka uhlole, uthuthukise futhi wakhe imikhiqizo emisha yochungechunge lwemisebenzi eminingi.
■ Izindawo zokufaka isicelo somkhiqizo kaNoelson Chemcials ezihlanganisa ukumboza, uyinki, ipulasitiki, iraba, izinto zokwakha nezimboni zezimbiwa, ezinkampanini eziningi zomhlaba nezamazwe ezihlinzeka:
UNoelson Chemcials uchungechunge olukhulu lomkhiqizo ohlukile, ukuqondiswa kuyathandeka, ukugxila kokuhlosiwe, ubuchwepheshe obuningi, ukumaketha nokuthengisa kuthathe iqhaza elibalulekile le-maket emhlabeni wonke, ingxenye yomkhiqizo wokuthekelisa ihamba phambili e-China nase-Asia-Pacific esifundeni, ingumkhiqizi okhethekile kakhulu we-micro-powder nokusebenza kwe-pigment ezweni lase China kulezi zinsuku.
■ Ikhwalithi Engcono Kakhulu kanye Nensizakalo Engcono kakhulu yizinkolelo zeNoelson Chemicals. Yonke imikhiqizo yeNoelson Chemicals yenziwe futhi inikezwe ngamazinga asezingeni eliphakeme kakhulu, eminye imikhiqizo ehlosiwe ngokuya ngamazinga afanelekile wezokuxhumana (njengamazinga weAmerican Engineer technical Association, i-American FDA standard, standard RoHS standard njll) ekukhiqizweni nasekuphakelweni, futhi ithole isitifiketi se-ISO9001 / 2008 ne-European Union REACH. Eminyakeni edlule, uNoelson Chemicals usebenzisana ne-SGS, PONY inhlangano yokuhlola igunya lesithathu emhlabeni jikelele, ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo izinzile futhi ihlangabezana nezinga lomhlaba jikelele. UNoelson Chemicals unamahhovisi egatsha kanye ne-ejensi eJapan, e-Europe, e-USA kanye nasemadolobheni amakhulu e-China, ahlinzeka ngosizo oluphelele futhi olucijile lwezobuchwepheshe nezamabhizinisi kuwo wonke amaklayenti.
■ Ukuqamba ubuchwepheshe kuyisisekelo sokuthuthuka okuqhubekayo kwamaNoelson Chemicals. Eminyakeni edlule, uNoelson Chemicals ugcine ekuthuthukiseni inqubo ephezulu yesikhathi esizayo yemikhiqizo ye-powder chemcial, ngakolunye uhlangothi sishintshana ngokuphelele nezinye izinkampani ezidumile emhlabeni, sakha ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside, ukulandelela ubuchwepheshe obusha obuvela kwamanye amazwe, ukwethula i-patent yakamuva yamazwe omhlaba; ngakolunye uhlangothi, sisungule ubudlelwano bokusebenzisana ngokuseduze nokuqashelwa kwezwe kukazwelonke kanye nezikhungo ezahlukahlukene zocwaningo lobuchwepheshe, i-powder enkulu yasekhaya kanye nesikhungo esisha sokucwaninga ngezinto, i-laboratory enkulu yamakhemikhali kazwelonke. Eminyakeni embalwa eyedlule, sakha indawo yethu entsha sha yokufaka imvelo, uchungechunge lwe-antirust pigment, uchungechunge lwe-phosphate pigment uchungechunge kanye ne-powder conductive nezinto zokwakha uchungechunge lwemikhiqizo emisha, eyingxenye yemakethe engenalutho, futhi nezici ezisemqoka zikaNoelson Chemicals ngokuqhubekayo ehlezi esikhundleni sobuholi embonini.
■ Inzuzo yentengo, kwesinye isikhathi ibaluleke kakhulu njengobuchwepheshe.Nikeza ngamanani ancintisana kakhulu, njalo kuyinjongo ehlala njalo yeNoelson Chemicals. Uhlelo lwethu lokuphathwa kokuhlinzekwa kokusebenza ngobunono, ubukhulu bokukhiqiza namandla okuhlinzeka, ukwakhiwa kwemikhiqizo eyingqayizivele ukusiza amakhasimende ekwehliseni izindleko nasekuthuthukiseni ukuncintisana komkhiqizo.